IDiploma - Isazi semisebenzi yomphakathi - iGeofumadas
IDiploma - Isisebenzi sezomphakathi Isazi
Le mfundo ihloselwe abasebenzisi abanentshisekelo emkhakheni wemisebenzi yomphakathi, abafuna ukufunda amathuluzi nezindlela ngendlela ebanzi. Ngokunjalo, labo abafisa ukugcwalisa ulwazi lwabo, ngoba bayazi kahle isoftware futhi bafisa ukufunda ukudidiyela ukwakhiwa kwemisebenzi yomphakathi kumijikelezo yayo ehlukene yokutholwa, ukuklanywa kanye nemiphumela yemiphumela kwezinye izigaba zenqubo.
Dala amakhono okuzuza, okuklama nokuhlelwa kwamamodeli wemisebenzi yomphakathi. Le nkambo ifaka ukufundwa kwe-Civil 3D, enye yezinhlelo ezisetshenziswa kakhulu emkhakheni wokuhlola; kanye nokusetshenziswa kwamathuluzi ulwazi olusebenzisana ngawo kwezinye izigaba zenqubo, njenge-InfraWorks. Ngokwengeziwe, ifaka phakathi imodyuli ye-AutoCAD yobuciko obubanzi bokusebenza kokuklanywa okusizwa yikhompyutha okungachazwanga kumamojula we-Civil 3D.
Izifundo zingathathwa ngokuzimela, ukuthola idiploma yesifundo ngasinye kepha «IDiploma Civil works Expert»Ikhishwa kuphela lapho umsebenzisi ethathe zonke izifundo ohambweni.
Thumela Previous«Langaphambilini Ama-geomoments - Imizwelo nendawo kuhlelo lokusebenza olulodwa
Post Next IDiploma - Isazi sokusebenza seBIMOkulandelayo »